Maxay Ahayd Sababtii Michael Owen Uu MALAGGA Ugu Maleeyey Zinedine Zidane? – Gool24.Net
Maxay Ahayd Sababtii Michael Owen Uu MALAGGA Ugu Maleeyey Zinedine Zidane?
Michael Owen ayaa qirtay inuu u maleeyey Zinedine Zidane in aanu qof caadi ahayn markii uu Real Madrid ugu tegay sannadkii 2004 ee uu ka midka noqday kooxdii xiddigaha Glacticos ee Florentino Perez uu dhisay.
Weeraryahanka hore ee Liverpool ayaa hal xili ciyaareed ka garab ciyaaray Zinedine Zidane oo ahaa 2004-05, waxaana waqtigaas uu ZIZOU ahaa mid xirfaddiisu cirka maraysay oo dadka uu indho sarcaad ku ridayay inkasta oo uu sannad kaddib ka fadhiistay ciyaaraha oo dhan.
Marka uu Owen tegay Santiago Bernabeyu, waxa uu Zidane kusoo guuleystay Koob Adduun iyo Champions League, laakiin kalidii ma ahayn ee waxa kale oo garbihiisa joogay laacibiin kale oo waaweyn sida Ronaldo Nazario, David Beckham, Raul Gonzalez, Roberto Carlos, Iker Casillas iyo laacibiin kale oo aan kala dhicin.
Michael Owen oo laga waraystay barnaamijka BBC-da ka baxa ee Savage Social ee uu soo saaro halyeygii Arsenal ee Robbie Savage, waxa uu ka sheekeeyey arrimo layaab ku noqday markii uu Santiago Bernabeu tegay, mana ahayn wax kale ee xirfadda Zinedine Zidane ayaa uu madaxa ka qabsaday.
Isaga oo ka hadlaya waxa uu Zidane ku arkay waxa uu yidhi: “Zinedine Zidane farsamo ahaan wuxuu ahaa ciyaartoyga ugu hibada badan. Wuxuu u dhashay in kubaddu ay lugihiisa ku dhex-jirto. Xattaa marka uu ordayo kubaddu si joogto ah waxay ugu jiraysay masaafo siman. Taabasho kasta – lugta biedix, lugta midig – wax kasta oo uu sameeyey waxay ahaayeen kuwo dabiici ah.
“Kubaddu waxay ku dhowaayd sidii uu isagu soo saaray. Haddii uu dhaqaaq sameeyo, kubadduna way raacaysay. Wuxuu ahaa laacib xariif ah oo maskax badan.”
Xilli ciyaareedka kaliya ee uu joogay Michael Owen, suurtogal umay noqonin inuu Real Madrid koob kula guuleysto, waxaase u farxad ahayd inuu qolka lebbiska la wadaagay Luis Figo, Roberto Carlos, David Beckham oo xilligaa ahaa kabtanka xulka England iyo sidoo kale Ronaldo Nazario oo isaga iyo Raul ay inta badan u diideen inuu fursad joogto ah ka helo safka hore.
Michael Owen waxa uu intaas kaddib qirtay sida uu malagga ugu maleeyey Zidane, waxaanu yidhi: “Wuxuu ahaa mid weyn oo xoog badan, haddii uu leexasho sameeyana wuxuu jarayay xawaare dheer. Wuxuu lahaa aragti iyo sidoo kale gool-dhalinta. Waxa uu ahaa ciyaartoy xariif ah.
“Waxa uu ahaa qofka markii aan ku biiray Real Madrid aan joojin kari waayay daawashadiisa inta uu tababarku socdo, waxaaban u maleeyey inuu yahay MALAG markaan dhinacyo badan ka fiiriyey.”